Free Education Carrier Supporting School named “Suu Vocational Institute” is opened. – Myanmar Photo News
အခမဲ့သင်ကြားနိုင်မည့် စုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသိပ္ပံ ဖွင့်လှစ်
Carrier Supporting School for Free Education named “Su” is opened on 30 January 2018 this morning at Hlaing Thar Yar Township,
Yangon Division. NLD Education Network group organized computer training, languages learning training , basic electric courses and other courses at this school. Chief Minister of Yangon Region , U Phyo Min Thein , attended this opening ceremony .
“အခမဲ့သင်ကြားနိုင်မည့် စုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသိပ္ပံ ဖွင့်လှစ်” အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရပ်များ အခမဲ့သင်ကြားမည့် စုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသိပ္ပံကို ဇန်န၀ါရီ ၃၀ ရက် နံနက်က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လှိုင်သာယာမြို့နယ် (၇)ရပ်ကွက်၌ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ ပညာရေးကွန်ရက်က ဦးစီးဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြစ်ပြီး ကွန်ပျူတာပညာသင်တန်းများ၊ ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှု သင်တန်းများ၊ လျှပ်စစ်ပြုပြင်နည်းပညာသင်တန်းစသည့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း သင်တန်းများကို အခမဲ့သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်သည်။ စုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသိပ္ပံ ဖွင့်ပွဲကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း တက်ရောက်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သည်။ သတင်း – ဆုဆက် ဓါတ်ပုံ – ကျော်ဇင်သန်း